Warbixin+Sawirro: Madaxweynaha dawladda Puntland oo si diirran loogu soo dhoweeyey magaalada Muqdisho – Gedo Times
Warbixin+Sawirro: Madaxweynaha dawladda Puntland oo si diirran loogu soo dhoweeyey magaalada Muqdisho
28th May 2016 admin Wararka Maanta 0
Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo waftigii uu hoggaaminayey ee maanta gelinkii hore kasoo amba baxay magaalada Garoowe ee caasimadda dawladda Puntland ayaa soo gaarey magaaalda Muqdisho ee Xarunta dalka Soomaaliya.
Madaxweynaha iyo waftigiisa ayaa waxaa garoonka Caalamiga ah ee Aadan Cabdulle kusoo dhoweeyey xubno ka tirsan labada gole ee xukuumadda dawladda Federaalka Soomaaliya oo uu hoggaaminayo Wasiirka Duulista Hawada Soomaaliya Cali Axmed Jaamac Jaangeli.
Soo dhoweyn kadib madxweynaha iyo waftigiisa waxaa loo soo gudbiyey qaybta nasashada ee Garoonka caalamiga ah ee Aadan Cabdulle halkaas oo Madaxweynuhu uu kula hadlay warbaahinta qaybeheeda kala duwan.
Ugu horrayn Madaxweynaha ayaa uga Mahadceliyey masuuliyiintii kusoo dhoweysey garoonka isla markaana waxaa uu ka warbixiyey ujeedada socdaalkiisa xilligan isagoona sheegay in uu magaalada muqdisho kaga qayb geli doono shirka Madashada wadatashiga Qaran oo lagu dhammaystiri doono dedaaladii dheeraa ee loogu jirey xal u helida hannaanka doorashooyinka 2016-ka.
Sidoo kale Madaxweynuhu waxa uu xusay in hannaanka doorashooyinka 2016-ka uu marayo meel wanaagsan oo laga sii amba qaadi karo, isla markaana qorshaha ugu weyn ee shirkaani uu yahay fulinta dhammaan heshiisyadii hore loo gaarey ee dhabbaha loogu xaarayey dawlad cusub oo dalka ka dhalata 2016-ka.
Ugu dambayn, Madaxweynaha iyo waftigiisa ayaa waxaa loosii gudbiyey xarunta Villa Hargaysa ee Madaxtooyada Soomaaliya halkaas oo uu Madaxweynuhu ka degi doono magaalada Muqdisho.
DEGDEG: Qarax ismiidaamin ah oo goor dhow ka dhacay magaalada……
Canab Cuud oo Buraanbur Uqaadey Jubbaland,Odayaasha,Gabdhaha London